फरारहरूको फ्रेस विज्ञप्ती « paniphoto
« पाहुनाको कुरा – लघुकथा राजनीतिमा केटाकेटी ! »	फरारहरूको फ्रेस विज्ञप्ती
By -paniphoto- on Saturday June 16, 2012	-लक्ष्मण गाम्नागे-
आदरणीय सम्पूर्ण फरार सहकर्मीहरू,
क्रान्तिकारी अभिवादन् ।
केही उल्लू मानिसहरूले, केही पित्तपत्रकारिता गर्ने सञ्चार माध्यमहरूले हामी वरिष्ठ फरार अपराधी महानुभावहरूका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी गरी हाम्रो प्रतिष्ठामा बारम्बार आँच पुर्‍याइरहेका घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिकृयावादी, पुरातनपन्थी वा दक्षिणपन्थी बिचारका पृष्ठपोषकहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म विपरित हामी प्रतिष्ठित फरार व्यक्तित्वहरूले गरेका सानातिना अपराधमाथि कार्वाहीको प्रश्न उठाउँदै समाचारहरू प्रकाशित गरेकोमा हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ । राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय स्तरका हामी होनहार फरार प्रतिभाहरूका विषयमा अपमानजनक समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नेहरूलाई मानहानीको मुद्दा लगाउन सकिने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।
यहाँ के फरार छैन ? सबथोक फरार छ । नेता छन्, नैतिकता फरार छ । आयोग छ, योजनाहरू फरार छन् । बजेट छ, विकास निर्माणहरू फरार छन् । सम्विधानसभा छ, सम्विधान फरार छ । न्यायाधीश छन्, न्याय फरार छ । सरकार छ शक्ति फरार छ । कर्मचारी छन्, कर्म फरार छ । देश छ, सार्वभौमसत्ता फरार छ । कार्यपालिकाका कार्य फरार छन् । न्यायपालिकाबाट न्याय फरार छ । व्यवस्थापिकामा व्यवस्थै फरार छ । यस्तो अवस्थामा अपराधै अपराधहरू हुनु र अपराधीहरू फरार हुनु स्वाभाविक मात्रै होइन अनिवार्य छ । जहाँ प्रहरी वा सिङ्गै गृह प्रशासन स्वयं फरार छ त्यहाँ हामी जस्ता उच्चकोटीका चोर, डाका, लुटेरा, बलात्कारी, घुसखोर, हत्यारा आदि अपराधीहरू फरार हुनुलाई हामी फरारहरूले आफ्नो कर्तव्य नै ठान्दछौँ । फरार भइदिने परमकर्तव्य पूरा गरेर हामी सरकार र गृहप्रशासनलाई सक्तो सहयोग गरिरहेका छौँ । फरार हुनसक्नु कम चातुर्य र कलाको खेल होइन । साधारण अपराधीहरू फरार भएर सिमाना काट्छन् वा कतै कुनामा लुकेर बस्छन् । कहीँ फेला परे पक्राऊ पर्छन् र कारबाही भोग्छन् । तर हामी विशेष अपराधीहरू कतै भाग्दैनौ, कहीँ लुक्तैनौँ । हेर्दाहेर्दै हेरिन छाड्छौँ । देखिँदा देखिँदै देखिन छाड्छौँ । प्रहरीले नै हामीलाई ‘फरार होइस्यो’ भनेपछि हामी फरार हुन्छौँ । मन्त्रीकै अँगालोमा हामी अदृष्य हुन्छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग बसेर डिनर खाँदै हुन्छौँ, तर सरकारको बिचारमा फरार हुन्छौँ । देख्नुपर्नेहरूको आँखा नै फरार पारेर हामी वरिष्ठ अपराधीहरू सिंहदरबारभित्रै गायव हुन्छौँ, अदालतभित्रै हराउँछौँ । फरार भएर हामी कहिले संसदको वैठकमा टेबुल ठोक्तै हुन्छौँ, कहिले न्यायाधीशहरूका घरमा लैजान व्रिफकेश बोक्तै हुन्छौँ । कहिले पार्टी अध्यक्षकोमा लेवी बुझाउन जाँदै हुन्छौँ, कहिले गुप्तचरका हाकिमसँग रक्सी खाँदै हुन्छौँ । फौजदारी पाराको अलि जघन्यै अपराध गरिहालिएछ भने हामी व्यारेकमा वा क्यान्टोनमेन्टमा फरार हुन्छौँ । हामी कहिले अन्तरराष्ट्रिय सेमिनारहरूमा सुशासनको पक्षमा प्रवचन दिँदै र कहिले भ्रष्टाचार विरुद्धका जुलुसहरूमा चर्काचर्का नारा लगाउँदै फरार भइरहेका हुन्छौँ । देशका कति हामी खरदारहरूले ठाउँठाउँमा दरबार ठड्याएका छौं । हामी कति सुव्वाहरूले सिंहदरबार बनाएका छौँ । हामी कति अफिसरहरूले, सचिवहरूले वा मन्त्रीहरूले आलिसान महल उठाएका छौँ । हामी कत्ति व्यापारीहरूले कालो धन्धा गरेर सम्पत्तीको डङ्गुर लगाएका छौँ । हाम्रा महलहरू, मोटरहरू, हिरा जहावरातहरू, घडेरीहरू, देशविदेशका भ्रमणहरू, सुख, सयल र मोजमस्ती सबै दुनियाँदार सामू हाजिर छन् । हामी भ्रष्टाचारीका मुस्कान हाजिर छन्, डकार हाजिर छन्, निन्द्रा र घुर्राहट हाजिर छन् । अर्थात् भ्रष्टाचार जताततै हाजिर छ तर हामी भ्रष्टाचारी फरार छौं । हामी चोरहरू फरार छौं । चोरीका गाडी गुडाउने मतियारहरू फरार छौं । ससाना घुसखोरहरू खोरमा होलान् तर हामी ठूला ठूला चोरहरू कहिल्यै फेला नपर्ने ग्यारेन्टीकासाथ फरार छौं । हाम्रो यो अतुलनीय क्षमताका लागि राष्ट्रले हाम्रो अभिनन्दन् गर्ने कि अपमान ? हाम्रा अग्रजहरू सीताराम, बडु, वाग्ले, पियुस इत्यादि माननीय भ्रष्टाचारीहरू हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ । तत्कालीन वरिष्ठ फरारहरूले खनेको बाटोलाई भर्खरै कमरेड खामले अलि ठूलो, अलि फराकिलो, अलि सफा, अलि आधुनिक र अलि कालो पार्नुभएको छ । ल हेर्नुस् त, गाँजा चरेस हाजिर छन्, यार्चागुम्बा हाजिर छ, हतियारहरू हाजिर छन्, मतियारहरू हाजिर छन््, नक्कली छापहरू हाजिर छन्, नक्कली नोटहरू हाजिर छन्, कुटेका मान्छे हाजिर छन्, लुटेको रकम हाजिर छ, तर कमरेड खाम फरार । के यो चमत्कार होइन ? यस्ता चमत्कारी व्यक्तित्वलाई कारबाहीको कुरा उठाउनेहरूलाई नै कारबाही गर्नु पर्ने हो कि होइन ? सरकारले सोच्नुपर्छ ।
आदरणीय फरार सहकर्मीहरू,
दुईचार थान भरुवा बन्दुक जम्मा गरेर कति संगठनहरू, कति मुक्तिमोर्चाहरू बनिसके । हामी फरार अभियुक्तहरू पनि अब संगठित हुनुपर्छ । केन्द्रीय समिति, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समितिहरू बनाउनुपर्छ । पूर्व प्रतिष्ठित फरारहरूलाई सल्लाहकार र वर्तमान वरिष्ठ फरारहरूलाई अध्यक्ष, महासचिव बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । वरिष्ठ र ख्यातिप्राप्त फरार हत्यारा, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, डन र बलात्कारीहरूलाई सदस्यता दिनुपर्छ । अपराध गर्ने र फरार हुने अधिकार रक्षाका लागि तपाईँहरू सबैलाई गोलबन्द हुँदै निम्नानुसारका मागहरू राखी शसक्त रुपमा आन्दोलनमा लाग्न आह्वान गर्दछौँ । फरारहरूलाई कार्वाहीको माग गर्नेहरूलाई गिरफ्तार गर !
फरारहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान दे !
फरारहरूलाई संसदमा आरक्षणको व्यवस्था गर !
नयाँ मन्त्रीमण्डलमा फरारहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ ।
सम्पूर्ण फरारहरू एक होऔँ !
फरार एकता– जिन्दावाद !
« पाहुनाको कुरा – लघुकथा राजनीतिमा केटाकेटी ! »	2 comments to फरारहरूको फ्रेस विज्ञप्ती
· जवाफ दिनुहोस्	नया नेपालको नया पाठ्यक्रम
क =कुकुर नेता
ङ= ङ्याच्च पर्ने नेता
झ=झापड खाने नेता
ञ = सिंग नभएका नेता
ठ= ठग नेता
ण= त्रिकोण पार्टी का नेता
थ=थुतुनो बिग्रेको नेता
य=यमराज जस्तो नेता
र=रडाको मचाउने नेता
व=वास्ता खबर नभएका नेता
स=सबै चोर नेता मंत्री
श=शंक फ़ुकेर लान पर्ने नेता
ह=हरामी कुकुर नेता
त्र=त्रिशुलीमा फ़ाल्नु पर्ने नेता
…..यसरी फ़ाल्न सक्यौ भने हामी
ज्ञ=ज्ञानी भैइन्ंछ है ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Santosh Pandey
· जवाफ दिनुहोस्	वया क्या गजब छ नेपाल मा फरारहरु लाई साह्रै राम्रो लाग्यो अब म पनि फरार हुनु पर्छ….कि क्या हो ..
यही Category बाटदशैंमा देवीसामु नेताको प्रार्थना – व्यंग्यचुनावको लागि एउटा घोषणापत्र – व्यंग्यसेलिब्रिटी हुनुपर्यो, आकास छुनुपर्यो – व्यंग्यमम: पुराण – हास्यव्यंग्यगर्मीमा पग्लिँदा वैँशहरुसुखी जीवनका उपायझ्याउ – हास्यव्यंग्यजय ! जमानानयाँ दलको घोषणा-पत्रआऊ वार्ता गरौँ – व्यङ्ग्य कविताOnline Users7 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार